ဗုံးတရားခံ မြောက်ဥက္ကလာတွင် ဖမ်းဆီးမိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဗုံးတရားခံ မြောက်ဥက္ကလာတွင် ဖမ်းဆီးမိ
ဗုံးတရားခံ မြောက်ဥက္ကလာတွင် ဖမ်းဆီးမိ
Posted by မှော်ဆရာ on Dec 28, 2011 in Myanma News, News | 11 comments
ဗုံးတရားခံကို မြောက်ဥက္ကလာမှာ ဖမ်းမိတယ်လို့ အီလဲဗင်း မီဒီယာ ဂရုရဲ့ ၀က်ဆိုက်မှာ ရေးသားထားပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်လဲ ညံ့လို့လားမသိ..။ ဖတ်ရတာ မရှင်းဘူးဗျ … နဲနဲတော့ ကူးပြမယ်နော် ..
>>> ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင် ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ဖောက်ခွဲ ရေးသတင်းအရ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၆ နာရီအချိန်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဟံသာဝတီခရိုင် သုံးဆယ်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကိုစိုင်းတင်မင်းထွန်း တောင်ကြီးမြို့တွင်နေသူအား စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင်နေထိုင်ကာ ဖုန်းအငှားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ ကိုစိုင်းတင်မင်းကို၏ နေအိမ်တွင် မိုင်းနှစ်လုံးထားရှိခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးသိရှိရသည်။ <<<
ကိုစိုင်းမင်းထွန်း က တောင်ကြီးက ၊ မြောက်ဥက္ကလာက ကိုစိုင်းတင်မင်းကို အိမ်မှာ မိုင်းနှစ်လုံးထားခဲ့တယ်..။အဲဒီလိုဆိုတော့ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ သုံးဆယ်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့က အဲဒီ့သတင်းကို သိပြန်တာတုန်း ..။ စိုင်းမင်းထွန်းက သုံးဆယ်ကို ထွက်ပြေးလို့လား … ။နောက်ပြီး မဖောက်ရသေးတဲ့ မိုင်းနှစ်လုံးကို မြောက်ဥက္ကလာ မှာ မိတယ်လို့ဆိုတယ်..။ဒါပေမယ့် ဖျက်ဆီးပြီးပြီတဲ့ ၊ ၀ါယာကြိုးတွေ ဖြတ် ဗုံးထည့်ထားတဲ့ ကွန်ပါဘူးတို့ ၊ နာရီတို့ကို မီးရှို့ထားတယ်တဲ့…။ ဒီတိုနေတာနဲ့ ယမ်းတုန်းကိုတော့ ချောင်းထဲ ပစ်ချခဲ့တယ် ဆိုတယ်…။ သူမဖောက်ရဲတော့လို့ ဖျက်ဆီးလိုက်တာလား..။ ဒါမှမဟုတ် တခြားတစ်နေရာမှာ ဖောက်ပြီးလို့ နောက်တစ်နေရာအတွက် အခွင့်မသာတော့လို့ လက်စပျောက် ထွက်ပြေးဖို့ကြံသလားဆိုတာလဲ မသိပါ..။
နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ ထဲမှာတော့ ပါမပါ မသိသေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် လှည်းတန်းကိစ္စက သူ ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာလဲ မပါဘူးဗျ..။ မိတာ ၂၁ ရက် မနက် ၆ နာရီ.. လှည်းတန်းကိစ္စက ၂၁ ရက် နေ့လည် ၁၁ နာရီဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ထင်တာပဲ ..။ ဒါပေမယ့် ဘယ်က ခိုင်းတယ်..။ ဘယ်သူတွေ ပါတယ်။ ဘယ်မှာ လုပ်ဖို့ ကြံစည်တယ်..။ ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာတွေကိုတော့ တနွယ်ငင် တစ်စင်ပါ ဆိုသလို အကုန်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ ထင်၇ပါတယ်…။
မူရင်းလင့်ကို ဖတ်ချင်ရင်တော့ http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11634:2011-12-25-09-08-29&catid=43:2009-11-10-07-39-09&Itemid=111
မှာ ဖတ်နှိုင်ပါတယ်…။ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ လုပ်သည်ဖြစ်စေ .. မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ ပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ .. သာမန်ပြည်သူပြည်သားများအား ထိခိုက်နစ်နာစေသော အကြမ်းဖက်မှုများအား ရှံ့ချပါသည်။ အကြမ်းဖက်မှုများ ပပျောက်ပါစေ ။။။
ဒီလိုလေ အဲ့သည် ပုဂ္ဂိုလ်က ရမ်းတွေကို ချောင်းထဲ သွားပြစ်ချတာ စပွန်ဆာပေးလို့ သူတို့သိသွားတာ
( စိုင်း ) ပါတယ်ဆိုတော့ တောင်ပေါ်သားတွေပေါ့ဗျာ
လုပ်ပါ အဲ့သည် သဘုံ ဘယ်ကောင်လဲ ပြည်သူတွေသိအောင် ကြေငြာပါဦး
ဘယ်အဖွဲ့လဲ သဘုံက ဝန်ခံရင် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ
သဘုံတစ်ကောင်ဖမ်းမိတယ် သတင်းကြေငြာပြီး ရင် ပြီးရော လုပ်မလား
ကဲ တောင်ပေါ်သား သဘုံတွေရေ
မင်းတို့ ဘုံးခွဲစရာနေရာမရှိလို့ ချီးပါတဲ့နေရာမှာ ဘုံးခွဲတယ်လို့ လုပ်နေပြီ
( ငါလိုးမသားတွေ ဗုံးခွဲစရာနေရာရှားလို့ ချီးပါတဲ့နေရာမှာ သွားခွဲတယ် ဆဲတော့လည်း ကျုပ်က မိုက်ရိုင်းပြန်ရော )
ကျနော်က ဒီမိုဝေယံမှာ အဲဒီလိုတွေ့တာခင်ဗျ။
Credit to …..
လှည်းတန်း အများသုံးအိမ်သာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု သပွတ်အူ အရှုပ်အထွေးကြီး [By အဘ ဥက္ကာကိုကို]
အံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ် အမှုအခင်း တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်တော့သည်။ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသူ
မခင်မြတ်နွယ်(၂၄)နှစ်မှာ ယခုဆိုလျှင် နှစ်ကြိမ်သေဆုံး၍ နှစ်ကြိမ်ပြန်လည် ရှင်သန်လာခဲ့သည်။
ကံကြမ္မာက မျက်လှည့်ပြလွန်းသည် ဟူသော ကဗျာစာသားများကို ဖတ်ဖူးသည်။ ယခုအမှုတွင် မည်သူကမည်သူ့ကို
မည်ကဲ့သို့ မျက်လှည့်ပြနေမှန်း မသိတော့။ သတင်းသမားများက အမှုမှန်ကို တင်ဆက်နိုင်ရန် အပြေးအလွှား
လိုက်ကြသည်။ ပြောနိုင်သိနိုင်မည့် လူများကို မေးမြန်းသည်။
တာဝန်ရှိသူတွေဆိုသည့် ငနဲတွေဆီမှာ စုံစမ်းသည်။ အဖြေမှန်ကို မရရေးချမရ။ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက
NO VOTE လုပ်ကြတာနဲ့ တူနေသည်။
နိုး…နိုး… ရက်စ်.. နိုး… ရက်စ်.. ရက်စ်.. နိုး..နိုး… စသဖြင့်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အခင်းဖြစ်စဉ်ကတည်းက သတင်းထောက်များ ရရှိနေသည့် သတင်းက မိန်းကလေးနှစ်ဦး၊
ကျားတစ်ဦး။ နှစ်ဦးသေ။ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ။ အဲ့သလိုဖြစ်သည်။ နာရီဝက်ခန့်ကြာလာတော့ ယောက်ျားလေးမပါ။ မိန်းကလေးတစ်ဦးသေ။ တစ်ဦး ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိ… ဖြစ်လာသည်။ ဗုံးတစ်လုံး ထပ်တွေ့သည်ဟုဆိုကာ
ခွေးရော၊ စစ်သားရော အိမ်သာခြံဝင်းအတွင်း ခြေချင်းလိမ်နေသည်။
သတင်းသမားတွေကလည်း ဟိုမေးဒီမြန်းဖြင့် ရရာသတင်းအစအနကို ဆွဲထုတ်နေကြရသည်။
တစ်ယောက်ကလည်း ဒီတိုနေတာ..ဟု ထင်မှတ်ရတဲ့ အရာတစ်ခုကို ကိုင်လာသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
သေချာကြည့်တော့ ရေသန့်ဘူးဖြစ်နေကြောင်းဓာတ်ပုံရိုက်လာသူ သတင်းထောက်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ရေသန့်ဘူးထဲတွင် သံချောင်းတစ်ချောင်း ထည့်ထားတာ ဖြစ်ကြောင်း သူကဆိုသည်။
အခင်းဖြစ်ရာနေရာတွင် ဆလွန်းကား မီးခိုးရောင်တစ်စီး ရပ်ထားသည်။ ကားခေါင်မိုးတစ်ခုလုံးတွင်
အင်တဲန်နာတိုင်များ ထောင်ထားသည်။စစ်သားတစ်ဦးအနားမှာ ရပ်နေသည်ကို သတင်းထောက်တစ်ဦးက
မေးကြည့်တော့ ဂျန်မာ ဟုခေါ်သည့်ကားဖြစ်ကြောင်း၊ ဗုံးကျန်ရှိသေးလျှင် ထပ်မံဖောက်ခွဲမှု မပြုနိုင်ရန်
သတင်းတွေက အချိန်နှင့်တပြေးညီ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်လာသည်။ သို့သော်လည်း မီဒီယာများကြား
၀ိဝါဒကွဲပြား နေဆဲဖြစ်သည်။နှစ်ဦးသေတာလား။ တစ်ဦးသေတာလား။ စေတနာကိုအရင်းခံကာ
ကိုယ့်စာဖတ်ပရိသတ်ကို သတင်းပေးချင်ဇောနှင့် ရသလောက်၊ ကြားသလောက်တင်ဆက်ကြတော့သည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှု နေ့လည်ပိုင်းမှာတော့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာနမှာ သတင်းထောက်တချို့
ဗျာများနေကြသည်။ ခွဲစိတ်ခန်းဝင်နေသော မခင်မြတ်နွယ်၏ ဦးလေးဟုဆိုသူ စည်ပင်ရဲသား ဒုတပ်ကြပ်
““အခြေအနေမကောင်းဘူး””ဆိုသည့် စကားကို ကြားနေရသည်။ ဆေးရုံတွင် ဖွင့်ထားသော မှုခင်းရဲ ရုံးခန်းကို
မေးကြည့်ကြသည်။ မသိဘူး… ဟုတစ်ခွန်းသာ ပြန်ဖြေသည်။ ဘူးဆိုဖရုံမသီးဘူးဟု ခံယူထားပုံရသည့်
ဆေးရုံအုပ်ကြီးကလည်း ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေသည်။ သတင်းထောက်တွေ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ။ ညနေငါးနာရီကျော်တွင်
ခွဲစိတ်ခန်းမှ ထုတ်လာသော မခင်မြတ်နွယ်၏ တွန်းလှည်းနောက်သို့ လိုက်ကြပြန်သည်။ အဲဒီအချိန်မှာ
သတင်းတစ်ခုက မခင်မြတ်နွယ် သေဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလာသည်။
ရုံးပြန်ရောက်တော့ မခင်မြတ်နွယ် မသေဆုံး သေးပါကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိချက်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ
ရေးလိုက်သည်။ စာဖတ်သူတွေလည်း သက်ပြင်းချကြသည်။ တော်ပါသေးရဲ့…ပေါ့လေ။ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသူ
မစန်းရည်(၃၀နှစ်) မှာ ခြေနှစ်လက်၊ လက်နှစ်ဖက်ပြတ် ထွက်ကာ ဦးနှောက် ပွင့်ထွက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
အာဏာပိုင်တွေဆီက သတင်းအစအန အနည်းအကျဉ်းကို သတင်းထောက်တွေ စရလာကြသည်။
လှည်းတန်းတွင် ပေါက်ကွဲမှု မဖြစ်ခင်ကတည်းက တရားခံဟု ယူဆရသူတစ်ဦးကို မြောက်ဥက္ကလာတွင်
ဗုံးနှင့်တကွ ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းဖြစ်သည်။ သူ့နာမည်က ကိုစိုင်းတင်ဝင်းထွန်း ဖြစ်သည်။ သူ့ညီက ဗုံးကို အိမ်တွင်
လာထားသဖြင့် ကြောက်လန့်ကာ လွှင့်ပစ် ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု ကြားရသည်။
ညီဖြစ်သူက စိုင်းတင်ဝင်းကိုဖြစ်သည်။ စိုင်းတင်ဝင်းကိုအား သာယာဝတီနယ်ဖက်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု
ကြားရသည်။ တရားခံမှာ ကုလားဆင်ရုပ်နှင့် အသက် ၁၇ ၊၂၀ အရွယ် အောင်မျိုးသူဆိုသူဖြစ်၍ ထွက်ပြေး
တိမ်းရှောင်နေကြောင်း သတင်းတွေ ထပ်ထွက်လာသည်။တစ်ဆက်တည်းပင် ရန်ကုန်-ပဲခူးကားတစ်စီးပေါ်တွင်
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ထပ်ကြားရပြန်သည်။ မျက်မြင် သက်သေများလည်း ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
အထက်ပါ အချက်အလက်များသည် တာဝန်ရှိသူဟု ဆိုသည့် သတင်းရပ်ကွက်အတွင်းမှ ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
တရားခံဟု ယူဆရသူများ၏ ပုံကြမ်းများကိုတောင် ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်သည်ဟု ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုခဲ့သူ သတင်းထောက်
တစ်ဦးက ပြောသည်။ ၂၂ ရက်ညနေပိုင်း၊ မနေ့ညနေကပေါ့လေ။ ဆေးရုံတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက သတင်းထောက်
တစ်ဦးကို လူနာမခင်မြတ်နွယ် ဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောလွှတ်လိုက်သည်။
တခြားသတင်းထောက် တစ်ဦးကလည်း ၄ နာရီခွဲတွင် မခင်မြတ်နွယ် သေဆုံးသွားပြီဟု သိရကြောင်းကို ဆေးရုံမှ
သတင်းလှမ်းပို့သည်။ သို့ဖြင့် ၀မ်းနည်းကြောင်း သတင်းကို တင်ဆက်ကြပြန်သည်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်သူဖြစ်။ တောက်ခေါက်သူခေါက်။ လက်သီးဆုပ်သူဆုပ်၊ အံကြိတ်သူကြိတ်၊ ဆဲသူဆဲပေါ့လေ။ မခင်မြတ်နွယ် သေဆုံးသွားသည့်
သတင်းက မနေ့တစ်ညလုံး ညလုံးပေါက် အတည်ဖြစ်နေသည်။
နံနက် အိပ်ရာမှနိုးလာတော့… ဖုန်းတွေတဂွမ်ဂွမ်ဝင်လာသည်။ ဟော..ဟော.. မခင်မြတ်နွယ် မသေသေးဘူးတဲ့။ ကိုယ့်နဖူးကိုယ်ရိုက်ကာ အောင်မောင်းခြေထိုး တစ်ကွက်လောက်ထက ပြီး လဲသေချင် စိတ်ပေါက်သွားကြသည်။ သတင်းလှမ်းပေးနေသူ သတင်းထောက်ကလည်း အခိုင်အမာပင် မခင်မြတ်နွယ်နေထိုင်ရာ နေအိမ်ထဲမှာ ငုတ်တုတ်
ထိုင်၍ မိသားစုများရှေ့မှ ဖုန်းဆက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
အဲဒီလိုနဲ့… သေဆုံးကြောင်း သတင်းတင်ထားသည့် မီဒီယာတချို့က သတင်းထောက်များထံသို့ ဖုန်းဆက် အကြောင်း
““ဟင်… ပြန်ရှင်လာပြီလား… ””
““သွားပါပြီ..ဂျာနယ်မှာ သေပြီဆိုပြီး ရိုက်လိုက်မိပြီ””… စသဖြင့် ထိုင်ငိုမတတ်ဖြစ်ကုန်သည်။
ဒီအတောအတွင်း ဖုန်းဆက်ရတာလည်း သိပ်ကီးမကိုက်ပေ။ ဖုန်းလာတိုင်း… သတင်းထောက်တို့မှာ
““ မသေသေးဘူးလား.. မသေသေးဘူးလား””
ဟူသည့်စကားကိုသာ အော်အော်နေကြရသည်။ ဘေးလူကြားလို့မှ မသင့်တော်ဖြစ်ရသည်။
ထိုသို့ဖြင့် ထပ်စုံစမ်းလိုက်တော့ မခင်မြတ်နွယ် မသေသေးပါဟူသော သတင်းကို အတည်ပြုလာနိုင်သည်။
သတင်းထောက်များ ဆေးရုံသို့ပြေးကြသည်။ ဆေးရုံတွင်တော့ မခင်မြတ်နွယ်ကိုမတွေ့ရ။ ရဲတွေလည်း
တစ်ကောင်တစ်မြီးမှ မရှိတော့။ အော်ပရေးရှင်း ၀င်နေသည်ဟု ဆေးရုံကပြောသည်ဟု ဆိုသည်။ သို့နှင့်
မသေသေးဘူးဆိုတာ အတည်ယူ ရမလိုဖြစ်သည်။လူနာကိုလည်းမတွေ့ရတော့ သိပ်တော့မယုံချင်ကြသေး။
ဒီနေ့မနက်တော့ မခင်မြတ်နွယ်အမျိုးသားရော.. အာကာလင်းလင်းဟု ခေါ်သည့် နှစ်နှစ်သားအရွယ်
မခင်မြတ်နွယ်က ဦးလေးဆိုသူ ခင်မောင်လတ်တို့အိမ်တွင် အခကြေးပေး၍ နေထိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု
သိရသည်။ အိမ်သားတွေကလည်း အေးဆေးပဲဟုဆိုသည်။ မသေသေးဘူးပေါ့လေ။ မခင်မြတ်နွယ်၏
ဒီမနက် ၁၀ နာရီက ရွှေဂုံတိုင်မှာလုပ်တဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ စရဖတစ်ဦးကို တွေ့သဖြင့်
မေးကြည့်ရာ သူကလည်း မသေသေးပါဘူးဟု ပြောသည်။တရားခံဟု ယူဆသူ စိုင်းတင်ဝင်းကိုအား ဖမ်းမိထား
ကြောင်းလည်း ပြောသည်။ နေ့လည် ၁ နာရီခန့်မှာ ဗုံးသတင်း နောက်ဆက်တွဲကို လိုက်လံစုံစမ်းနေသော
သတင်းထောက်များ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံအောက်မှာ ဆုံကြသည်။ အချင်းချင်း ကွဲပြားကြပြန်သည်။ သေဆုံးသည်မှာ
အမှန်ဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာပြောကြသည်။ မသေဆုံးသေးတာလည်း အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြသည်။
တရားခံမှာ စွမ်းအားမြှင့် စစ်သည်တော် ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ ဖြစ်သည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက ယူဆနေကြ
ကြောင်း သူတို့က ပြောကြသည်။ ဗုံးဖောက်ခွဲမည့်သတင်းကို ကြိုတင်ရရှိ ထားသောကြောင့် အစိုးရဖက်ကလည်း
အသည်းအသန် စုံစမ်းနေကြောင်း၊ အဓိကပစ်မှတ်မှာ ဆူးလေနှင့်မြို့တွင်းတ၀ိုက်ဟု ယူဆနေကြကြောင်း သတင်း
ကဲ… တရားခံဘယ်သူလဲ။ မခင်မြတ်နွယ်ရော… သေလား.. မသေဘူးလား… ဘယ်လိုလဲ။ ဆေးရုံမှာ သွားကြည့်
တဲ့နေ့က မခင်မြတ်နွယ်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်သော သတင်းထောက်လေး တစ်ဦးအား ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပုခုံး
ပုတ်ကာ စကားတစ်ခွန်း ပြောသွားသည်။
““ဟေ့ကောင်… ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကွာ”” တဲ့။
တာဝန်ရှိသူဟု ဆိုသူများကိုယ်တိုင်က ဖင်တမျိုး ခေါင်းတမျိုး ပြောဆိုနေကြသည့် ဤရှုပ်ထွေးလှစွာသော အမှုအခင်း
သတင်းကို လက်ရှောင်ရကောင်းမလား… ဆက်စုံစမ်းရကောင်းမလား.. သတင်းထောက်များ သက်ပြင်းပြိုင်တူ
အရေးကြီးတာက သတင်းထောက်တွေ တစ်ယောက်မှ အချုပ်ထဲ မရောက်ဖို့ပဲ ဆရာသစ်ရေ …
ဒီ ဗုံးတရားခံကို မိတာမြန်လိုက်တာ။ စိမ်းလဲ့ကန်သာ လူ သတ်မှု ကတော့ ကြာလိုက်တာ။ အစိုးရ သစ် မှာ ဆက်လက်ဖော် ထုတ် ဖို့ တာဝန် ရှိတယ် နော် ….
စိမ်းလဲ့ကန်သာလူသတ်မှုကတော့ ပေါ်မယ်မထင်တော့ပါဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် တရားခံတွေထဲမှာ သူတို့လူတွေပါနေလို့ဖြစ်မှာ ဒါပေမဲ့ မျှော်လင့်ချက်တော့ဖြင့်ရှိပါသေးတယ် အဲဒါကတော့ ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိတဲ့တနေ့၊ပြီးတော့ ဥပဒေရဲ့ သက်ရောက်မှုသည် အမှန်တရားဆိုတဲ့တနေ့ အဲဒီနေ့ရောက်ရင်ဖြင့် အမှုမှန်၊အဖြစ်မှန်တွေလဲ အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိခွင့်ရပြီး ကျနော်တို့တတွေရဲ့ ဘ၀တွေလဲ တကယ့်ကို လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ပြောနိုင် လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင်ရေးတွေလဲ ရလာမှာပါ။
သတင်းတွေကတော့ အမျိုးစုံပါပဲ … ဦးဖျားဖျား ပေါ်ပင်ဖြစ်အောင် စွပ်တင်ပြီး တိကျခိုင်မာမှုဘက်ကျတော့ အလေးပေးတာ အားနည်းနေကြတယ် … ။ အခုပဲ ကြည့် … ရေးထားတဲ့ ပြည်တွင်းထုတ်ဂျာနယ်တွေ … ဗုံးပေါက်လို့ သေတဲ့ လူရဲ့ နာမည်ကို နှစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်ကွဲအောင်ရေးတယ် … ဒါ့ပြင် အသက်ကိုလည်း ၃၀ လို့ရေးတဲ့ ဂျာနယ်ကရှိသလို ၄၂ ဆိုပြီး ရေးတာကလည်း ရှိတယ် … ကဲ … တကယ့်အမှန်က ဘာလဲ … ။
ဂျာနယ်တွေ သတင်းမြန်ဆန်မှုအပြင် တိကျခိုင်မာမှုဘက်ကိုပါ အလေးထားလျှင်ဖြင့် မီဒီယာလောက ဟုန်းဟုန်းတောက် ပိုမိုကျော်ကြားလာလိမ့်မယ်လို့ မြင်မိပါကြောင်း …. ။
Charm Boy says:
လှည်းတန်းကိစ္စက သူမဟုတ် ပါဘူး သူ
ဗုံးခွဲတဲ့ တရားခံကို မိပြီလို့ သတင်း ရပါတယ်။ ရဲသတင်း အထူး တပ်ဖွဲ့ရဲ့ အဆိုအရ ဗုံးခွဲသူ တရားခံဟာ အမျိုးသမီး တဦး ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အမျိုးသမီးဟာ ပဲခူးမြို့ကို ထွက်ခွာမဲ့ မော်တော်ယာဉ်ကို စီးနင်းဖို့ ဆောင့်ဆိုင်း နေစဉ် ဖမ်းဆီး ခံရတာလို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီး ထံမှ ထိုင်းဘတ်ငွေ အမြောက်အများ အပါအဝင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၀၀၀) ကျော်လဲ သိမ်းဆီး ရမိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထူးဆန်းတာက အဆိုပါ အမျိုးသမီးဟာ နိူင်ငံသား စီစစ်ရေး ကဒ် ကိုင်ဆောင်ထားခြင်း မရှိဘဲ အဆိုပါ အမျိုးသမီးထံမှ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီရဲ့ စည်းရုံးရေးမှူး တာဝန်ခံ ကပ်ပြားတခုသာ သိမ်းဆီး ရမိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရဲသတင်း အထူး တပ်ဖွဲ့ အနေနဲ့ အဖြစ်မှန်ကို ပြည်သူများ အမြန်ဆုံး သိရှိနိူင်ဖို့ ဆက်လက် စုံစမ်း သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘယ်သူ လုပ်တာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်
တရားခံ အစစ် ကို အမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ် နိုင်ပါစေ ဟုသာ
ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ သာထပ်ပြီးတော့ မဖြစ်အောင် အထူး ဂရုစိုက်ပေးပါလို့ တာဝန်ရှိတဲ့ သူတွေကို တောင်းဆို
ဘယ်သူမှ မဟုတ်ဘူး။လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူတို့ ကိုယ်တိုင်သာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုလူ့ လက်ချက်၊ဒီလူ့ လက်ချက်ထိုးချ၊
လွှဲချအုံးမှာဘဲဗျ။မရှက်မကြောက် သူတို့ မို့ ပြောရက်တယ်။လိမ်လာတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး။ခင်များတို့ ယုံပေးနေတာလား၊ယုံနေတာလား။
ဒီခွေးသူတောင်းစား စစ်ခွေးတွေကိုယ်တိုင်ဘဲ တရားခံအစစ်က။